Jubbaland Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Jubbaland'
Madaxweynha Jubbaland iyo Ciidamo uu Wato oo Gaaray Degmada Afmadow (SAWIRRO)
Madaxweynaha maamul Goboleedka Jubbaland mudane, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo ay wehliyaan saraakiil iyo ciidamo katirsan maamulka Jubbaland ayaa gaaray degamada Afmadow ee gobolka Jubadda Hoose. Axmed Madoobe ayaa degmada Afmadow u tagay abaabulka iyo dardar galinta howlgalka xoraynta Gobolka Jubbada Dhexe, waxa uuna Madaxweynaha kulamo la qaadan doonaa saraakiisha iyo ciidamada ku sugan …
Shabaab oo soo Bandhigay Hub Badan oo ay Sheegeen Inay ku Qabsadeen Dagaalkii Buulo Gaduud (SAWIRRO)
Ururka AlShabaab ayaa soo bandhigay hub farabadan iyo gaadiid dagaal oo ay sheegeen inay ku qabsadeen dagaalkii cuslaa ee ay ku qaadeen xerada ciidanka deegaanka Buulo gaduud ee Gobolka Jubbada hoose 3-da bishii September ee sanadkan 2017ka. Sawirro ay soo bandhigeen Shabaabka ayaa wuxuu muujinayay dagaalkaasi inay ku qabsadeen hub u badan iyo qoryo Ak47 …
Waxaa soo baxaya warar sheegay in dagaalyahanada Ururka Al Shabaab ay saakay weerar culus ku qaadeen xerada Ciidamada Dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin Deegaanka Buulo Gaduud, oo 29-KM dhinaca waqooyi kaga beegan Magaalada Kismaayo. Weerarkan oo ku bilowday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo lagu dhuftay ilinka hore ee xeradaasi, ayaa waxaa …
Rag Shabaab ka Tirsan iyo Qaraxyo ay Wateen oo Gacanta Lagu Dhigay (SAWIRRO)
Dagaalyahano lagu tuhmayo inay ka tirsanyihiin ururka Al Shabaab oo watay qaraxyo dadka lagu gumaado ayaa waxaa lagu soo bandhigay Degmada Doolow, kadib markii laga soo qabtay Degmada Baled Xaawo ee isla Gobolka Gedo ka tirsan. Wasiirka amniga Maamulka Jubbaland C/rashiid Xasan Cabdi Nuur (Janan) oo Saxaafadda u soo bandhigay raggani, ayaa sheegay in hawlgal …
Madaxwewyne Farmaajo oo Maanta si Diiran Loogu soo Dhaweeyey Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
Wararka Inaga soo Gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland ayaa sheegaya in saakay halkaasi uu gaaray Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa safarkiisa ku wehlinayay Xubno katirsan labada Golle ee dowlada Soomaaliya iyo Saraakiil, waxaana garoonka Diyaaradaha si diiran ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha maamuklka Jubbaland iyo Masuuliyiin …
Diyaarad Maanta ku soo Dhacday Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garbahaareey
Wararka ka inaga soo gaaraya magaalada Garbahaarey ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta garoonka Diyaaradaha ee magaaladaasi ay ku soo dhacday diyaarad siday xamuul oo dooneysay inay ka soo degto garoonkaasi. Masuul ka tirsan garoonka diyaaradaha ee gobolka Gedo ayaa Warbaahinta u sheegay in diyaarad kasoo dageysay garoonka ay soo dhacday, waxa uuna tilmaamay …
Maamulka Jubaland oo soo Bandhigay Dagaalyahano ay ka Dileen Al Shabaab (VIDEO)
Maamulka Jubbaland ayaa Magaalada Kismaayo ku soo bandhigay maydadka laba dagaalyahan oo Shabaab ka tirsanaa, kuwaasi oo lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka Magaalada Kismaayo. Saraakiisha ciidamada Jubaland ayaa sheegay in labadan nin lagu dilay deegaanka Cabdi dhooreey oo kuyaala duleedka Magaalada Kismaayo, kadib markii ay isku dayayeen inay baxsadaan, xilli ay soo qaadeen weerar. …
Madaxweynaha Jubbaland oo mar Labaad Tababar u soo Xiray Ciidamo Lagu Tababaray Magaalada Kismaayo (SAWIRRO)
Madaxweynaha Maamulka Jubbaland mudane, Axmed Maxamed Islaam ayaa tababar usoo xiray Ciidamo katirsan kuwa militeriga oo tababaro kala duwan bilihii u danbeey ku qaadanayay Magaalada kismaayo. Ciidamadan oo ka kooban qaybo kala duwan ayaa waxaa ka mid ah Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska, Ciidamada Lugta, iyo kuwa gaadiidka. Ciidamada Kumaandooska ayaa goobta …